Intengiso Umgaqo-nkqubo wabucala
ngomphathi ku 20-03-15
Umgaqo-nkqubo wokusetyenziswa kwedatha Lo mgaqo-nkqubo uchaza ulwazi oluya kufuneka silusebenzise ukuxhasa iintengiso. Zeziphi iintlobo zolwazi esiziqokelelayo? Ukubonelela ngeemveliso zethu kufuneka sisebenzise ulwazi malunga nawe. Uhlobo lolwazi esiluqokelelayo luxhomekeke kwindlela oyisebenzisa ngayo imveliso yethu. Unokufunda ukuba ...
Yintoni iSitampu esiBandayo?
ngomphathi ku 19-08-08
Itekhnoloji Ukunyathela okubandayo kuthelekiswa nokuthelekiswa nesiko lokuTshisa okuTshisayo kuzo zombini ezinakho ukufikelela kwisiphumo sokuprinta okuqaqambileyo kwesitampu. Umahluko phakathi kwabo kukuba ukunyathela okubandayo akufuneki ukufudumeza xa kusetyenziswa. Eli libali isitampu esibandayo ...
I-7th China International All-India Exhibition yagqitywa ngempumelelo
ngomphathi ku 18-10-29
Ngo-Okthobha i-28 2018 i-China International Exhibition yase-India yagqitywa ngempumelelo eShanghai. Ngomxholo "wokuvula ixesha lokushicilela ubukrelekrele" kulo nyaka umboniso we-in-one ubonakalisa ngokupheleleyo iziphumo zokuphucula kunye neendlela zophuhliso lobuchwephesha bokushicilela kwi ...
Iilebhile zeKingfisher zifaka u-Edale flexo wesixhenxe
ngomphathi ku 18-10-11
Iilebhile zaseKingfisher ezinzeYate emantla eBristol e-UK zithenge i-Edale FL3 umshicileli wayo wesixhenxe we-flexo kumvelisi wezixhobo zase-UK. Iilebheli zeKingfisher zinceda ukutya kunye nokuthambisa kwezempilo kunye neelebheli zokuncamathela. Yayifaka umatshini wayo wokuqala wokushicilela u-Edale ngo-2001.
Yabelana ngezixhobo zokuprinta nabantu okhuphisana nabo I-Fairfax ivala izindlu ezimbini zokushicilela
Ngokwesivumelwano neNews Corp ekhuphisanayo yokwabelana ngezixhobo zokuprinta ngoJulayi kulo nyaka ingxilimbela yeendaba yaseAustralia iFairfax ivale amaziko amabini okushicilela eQueensland nase NSW kwaye ifandesi iyaqhubeka. Esinye sezityalo sokuprinta sise-Ormiston 25 km ukusuka kwindawo ehamba phambili yaseBrisbane ...
IPrati USA yonyula umphathi
ngomphathi ku 18-09-18
UPrati ubize uFrank Hasselberg njengomntu oza kukhokela inkxaso-mali entsha eMntla Melika. IPrati USA isungulwe njengenkampani ifuna ukomeleza ukuzibophelela kwayo kwintengiso eMntla Melika. UHasselberg wayekhe wasebenza noKocher + Beck Heidelberg noGallus eMntla Melika ...
Ipaki esecaleni ityale imali kwakhona kumanqaku e-laser
I-Parkside inkampani yokupakisha ekhethekileyo yenze utyalomali olubalulekileyo kwizixhobo ezikumgangatho ophezulu ze-laser ukudala amathuba amashishini amatsha. Utyalo-mali lwayo lwamva nje lwe-laser lwenza ukuba laser ifake amanqaku kumacala amabini kwifilimu enye okanye i-laminate ukwenza i-open-open and reclose pack design ...
U-Avery Dennison uqalise ukusebenzisa i-PET liners eYurophu
ngomphathi ku 18-08-30
U-Avery Dennison uzibanga njengomboneleli wokuqala wempahla yoxinzelelo olunobuzaza ukwazisa i-liner eyenziwe ngePET (rPET) ethengisa ngokutsha eYurophu. I-liner ye-rPET entsha isebenzisa inkunkuma ekhethwe kakuhle emva komthengi kwaye iya kwaziswa ngo-Okthobha u-2018 ...
I-Kodak yokuthengisa ukwahlulwahlulwa kwephakheji yokubonisa
ngomphathi ku 18-08-16
I-Kodak kukuthengisa icandelo layo lokupakisha elinobunkunkqele eliyivumela ukuba igxile kwiipleyiti zeshishini lokusingathwa kwesoftware kunye nelayisensi yophawu. Eli candelo livelisa kwaye lithengise inkqubo yeFlexcel NX yezixhobo ezisebenzisa imifanekiso yokuprinta iipleyiti ezisetyenziswayo kunye neenkonzo ezinxulumene noko ...
I-Amcor ifumana ukhuphiswano lweBemis kumhlaba kwi-NASDAQ
Umzi mveliso wokupakisha ujongene nobunzima obuninzi ngenxa yokunyuka kwemathiriyeli ekrwada. Njengenye yeenkampani eziphambili zokupakisha emhlabeni i-Amcor (i-ASX: i-AMC) ixoxisene ne-Bemis yayo okhuphisana nayo e-US ngaphezulu konyaka kwaye izakufikelela kwisivumelwano sokufumana inkampani nge-A $ 7 yezigidigidi eyi-e ...
Ukupakisha kwe-Inovar kufumana iilebhile ze-Topp
Iqela le-Inovar Packaging lifumene iilebhile ze-Topp ezonyusa amandla alo okusebenzela ukuthengisa kwiimarike eFlorida nakwimpuma ye-US. Ikomkhulu eDallas Texas Inovar sisiguquli esikhethekileyo seelebheli eziphambili zokuncipha imikhono kunye neemveliso zokupakisha eziguqukayo. Isebenza kubathengi be-blue-chip ngaphakathi kwe-diver ...
IMPAHLA YOKUHLAWULWA KWENKQUBO YE-NPA KUNYE NEMIGCA YOKUTHUNYELWA KWABATHATHU
Njengenxalenye yemizamo yokusombulula uqhankqalazo olwenziwa ngabaqhubi beelori eLagos Port Complex (LPC) kunye naseTin Can Island Port (TCIP) eLagos i-Nigerian Ports Authority (i-NPA) ibhengeze ukumiswa kweentsuku ezilishumi kweenkonzo zeenkampani ezine zokuThumela. okokuqala. Ukuhanjiswa kweComp ...
ipholiyesta ifilimu, ifilimu yokushisa ubushushu, Izitampu ezishushu, Hot ngefoyile ye, Hot Ukunyathela Ukunyathela, Abavelisi beefilimu ze-bopp zesinyithi,